सार्वजनिक पदमा रहेकाको शैक्षिकदेखि आपराधीक विवरण लगायत सबै गोप्य !
सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
कल बाइपास मुद्दामा १७ करोड जरिवाना माग
कल बाइपास मुद्दामा १७ करोड ८५ लाख २० हजार जरिवानाको मागसहित चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । दुईजना बंगलादेशी नागरिकसँग मिलेर अवैध कलबाइपास गरेको आरोपमा प्रहरीले साउन ७ गते तीनजना नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार नेकपा प्रदेश कमिटीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूभन्दा पहिला जनतालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।
संहिता सच्याउन जनजाति महासंघको माग
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भदौ १ गतेबाट लागू भएका अपराध र देवानी संहिता एकल जातिवादी र नश्लवादी भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
सभापतिले कार्यकाल बढाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसमा पौडेल समूह आक्रोशित
सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पार्टीको महासमिति बैठक पछि धकेल्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आक्रोशित भएको छ ।
प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।
मुलुकमा बोलिने भाषाहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसँगै प्रविधिमैत्री बनाउने कामको थालनी भएको छ । भाषा आयोगले मंगलबार प्रविधिविज्ञ प्राध्यापक, अनुसन्धाता, भाषाशास्त्री, प्रविधिसँग सम्बन्धित युवाको प्रतिनिधित्व रहेको ‘भाषा प्रविधि विचार अन्वेषण गोष्ठी’को आयोजना गरी सुरु गरेको हो ।
तरकारीमा हुने बिचौलियाको तह घटाउन कार्यदल गठन
आपूर्ति मन्त्रालयले तरकारीमा हुने बिचौलियाको तह घटाउन कार्यदल गठन गरेको छ । मंगलबार आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, काठमाडौ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
पहिलो मुद्दालाई स्वागत
अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेलाई स्वागत गरिएला ? अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन आउनेलाई स्वागत गरिएको पाइदैन । जिल्ला अदालत बागलुङले भने मंगलबार पहिलो पटक मुद्दा लिएर गएका पक्षलाई फूलअबिरले स्वागत गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणः मन्त्रालयले माग्यो रूख काट्ने अनुमति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रुख काट्न अनुमति मागेको छ ।
नयाँ ऐन प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित : आइएफजे
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)ले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐेन २०७४ ले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको बताएको छ । मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले नयाँ अपराध संहिताले गरेको व्यवस्था प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
चितवनमा पोल्ट्री सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा कुखुरापालनको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा निरन्तर कार्य गरिरहेका वैज्ञानिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा 'घरघरमा पाइपबाट ग्यास' उद्घाटन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा घरघरमा पाइपबाट ग्यास बाँडिने भाषण गरेपछि धेरैले हाँसोमा उडाए । भारतले नाकाबन्दी गरेर ग्यासको अभाव भइरहेको बेला उनको यो भनाई पत्याउनेको संख्या कमै थियो ।
१३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीले नक्कली हत्यारा सार्वजनिक गरेको भन्दै महेन्द्रनगरबासी आन्दोलित बनेका छन् । सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी भीमदत्त नगरपालिका-१९ बाग्फाँटाका ४१ वर्षीया दीलिपसिंह विष्टलाई बलात्कारपछि हत्या आरोपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
कृष्ण अधिकारी हत्या मुद्दा: अदालत आएनन् नूरप्रसाद
कृष्ण अधिकारी हत्या मुद्दाका जाहेरवाला नूरप्रसाद अधिकारी सोमबार अदालतमा हाजिर भएनन् । जाहेरकर्ता नआएपछि भदौ २४ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । अदालतले साउन २० मा जाहेरवालालाई बयानका लागि बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
पलाता गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकबाट कर नलिने घोषणा गरेको छ । बुधबार थिर्पुमा बसेको विशेष गाउँसभाबाट निर्णय गरेरै यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
तरकारीमा सिन्डिकेट: अनुगमनकर्ता नै नियन्त्रणमा
वाणिज्य विभागको अनुगमन टोली सोमबार बिहानै कालिमाटी पुग्दा तरकारी लिएर ललितपुर र बाराबाट आएका दुई गाडी भित्र पस्दै थिए । टोलीले दुवै गाडीका चालकसँग बिल र कागजात माग्यो । नपाएपछि नियन्त्रणमा लियो ।
टिकेनन् मह र गगनका फार्म
किसानलाई सस्तोमा तरकारी उपलब्ध गराउने भन्दै सञ्चालनमा आएका ठूला कृषि फार्म एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन थालेका छन् । ती फार्म लामो समय टिक्न नसक्नुमा बजारको समस्यालाई उनीहरूले प्रमुख कारण बताएका छन् ।
सरकारले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा ‘जेनरिक’ नाम लेख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्‌मा दर्ता भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अनिवार्य रूपमा जेनरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश सभामुखको आग्रह ‘समस्या समाधान होस्’
प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेका समस्या समाधान गरिदिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
किशोरी बलात्कार प्रकरण: गृहले झिकायो अनुसन्धान फाइल
सुस्त मनस्थितिकी १४ वर्षीया किशोरी बलात्कार अभियोग मुद्दामा ढिलाइ गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा संग्लन प्रहरीलाई बोलाएको छ ।
सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कलेज सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिबमोजिम कार्यदल गठन गरेको हो ।
रमेशचन्द्र अधिकारी, चन्द्र कार्की
तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभाका तरकारी बारीमा यतिखेर किसान होइनन्, व्यापारी र तरकारी लोड गर्ने गाडी देखिन्छन् । तरकारी टिप्ने समयभन्दा एक साताअघिदेखि नै व्यापारीहरू किसानका बारीमा हुन्छन् । व्यापारीको कब्जा तरकारी रोप्ने समयदेखि नै सुरु हुन्छ ।